रोचक – Chautari Online
काग तिहारको दिन यी वस्तु किन्दा मिल्छ लक्ष्मीको साथ ! राशि अनुसार के किन्ने के नकिन्ने ?
काठमाडौँ- पञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो । धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ भाँडाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा रही आएको छ । धनतेरसको दिन सामानहरु किन्ने र दीपदान गर्ने दिन अर्थात् धनतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो । काग तिहारको दिनमा प्रत्येक राशिका मानिसहरुले के किन्न हुन्छ र के किन्न हुन्न भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी रहेको छ । जानेर बुझेर खरिद गरे देखि लक्ष्मीले कहिले साथ नछोड्ने विश्वास पनि रहेको छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनतेरस भएको दिन कुन राशी भएकोले के किन्न हुने र नहुने तथा पूजा गर्ने बिधि तल विस्तारमा दिईएको छ ।
Nov102020 by adminNo Comments
त्यसपछि श्रीमानको टाउको प्लाष्टिकमा बोकेर जाँदै थिईन्…
काठमाडौं । एक ३५ वर्षकी महिलाले आफ्नो श्रीमानको टाउको प्लाष्टिकको ब्यागमा लिएर हिडेको अवस्थामा महिलाले फेला पारेर प्रहरीलाई बुझाएका छन् । यो घटना मेक्सिकोको हो । ३५ वर्षीया रिवेराले आफ्नो श्रीमान रामोसको टाउको प्लाष्टिकमा बोकेर हिडेको बेलामा छिमेकी सर्टियागोले देखिकी थिइन् । छिमेकीले उनलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि कुु टुपिु ट गर्न लागे । एक जना छिमेकीले उनलाई बचाएर प्रहरीको जिम्मा लगाइदिइन् । वृद्ध अवस्थाका उनका पतिको टाउको प्लाष्टिकमा लिएर हिडेको बेलामा अचानक टाउको सडकमा ख सेपछि छिमेकीले देखेका थिए । ७० वर्षका सामोसलाई उनले ह त्या गरेकी हुन् । छिमेकीका अनुसार उनले सै ता नलाई खुसी पार्न ७० वर्षका श्रीमानलाई ब लि दिएकी थिइन् । मेक्सिकोको नगरपालिकाको अमेकामेका राज्यको एउटा शहर सान्टियागो कुउहेटेन्कोमा भएको यस्तो घटनाले स्थानिय आ क्रो शित भएका थिए । आक्रोशित स्थानियले उनलाई कु ट पि ट गर
भारतः बिहारबाट एक अनौंठो घटना देखा पर्यो। । यहाँ एक श्रीमानको होश उड्यो जब उनको भर्खँरै विवाह भएको श्रीमतीले उनलाई भनिन कि म तिमीलाई माया गर्दिन तर सपना नामकी केटीलाई माया गर्छु र उनीसंग मेरो जीवन बिताउन चाहन्छु । वास्तवमा यो घटना बिहारको बेगूसरायको हो । जुन १४ मा, रांची निवासी पूजाले बेगूसराय निवासी अंकित कुमारसँग परिवारका सदस्यहरूका बीच सँग विवाह गरिन् । विवाहपछि पूजा आफ्नो पतिसँग बेगूसराय आइन् तर १० दिन पछि उनले आफ्नो श्रीमानसँग बस्न इन्कार गरिन् । पूजाले भनिन्, ‘दुई बर्षदेखि म सपना नामकी केटीसँग समलिङ्गी जीवन बिताइरहेको थिएँ र उनीसँग बिहे गर्न चाहन्थें ।’ यो सुनेर अंकित आश्चर्यमा परे र पुलिसलाई सूचना दिए । यसपछि प्रहरीले दुबैलाई चौकी बोलायो र तर पूजाको प्रेमिका सपना रांचीबाट बेगूसराय पुगिसकेपछि पुलिस स्टेशन गइन् र उनको प्रेमिकालाई आफूसँगै बस्न भन्यो । उनीहरू रांचीको कपडा पसलमा का
आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला !!
हरेक मानिसहरु राती सुतेपश्चात आनन्दको निन्द्रा चाहन्छन्। राम्रो निन्द्राले शारीरिक थकानको साथै मनको शान्ति समेत मिल्छ। राति सुत्दा यदि राम्रो संग निन्द्रा लागेको छैन भने त्यहाँ वास्तुसंग सम्बन्धित कुनै दोष भएको हुन सक्छ। त्यसैले राति सुत्दा यी ७ सामाग्रीहरु भुलेर पनि आफु सुत्ने खाट तथा सिरानी वरिपरि राख्ने गर्नु हुदैन । १.राती सुत्ने समयमा सिरानीमुनि पर्स तथा औ’षधीहरु कहिले पनि राखेर सुत्नु हुदैन। २.सुतेको समयमा पानीको भाँडोलाई टाउको नजिक राख्नु हुदैन किनकि यसले म’नोरोग उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा हुन्छ। ३.सुत्ने समयमा हरेक दिन यो कुराको याद गर्नु पर्ने हुन्छ कि आफु सुत्ने खाटमुनी या सिरानीको नजिक जुत्ता चप्पल राख्नु हुदैन। किनकी यसो गर्नाले शरीरमा ने’गेटिभ इन’र्जी पैदा गराउछ। ४.यदि राती सुत्दा घर , गाडी या अफिसको चाबी साथमा राखेर सुतियो भने चो’री हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।५.मोबाईल ,
Nov62020 by adminNo Comments
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बना एको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइ ने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ। धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूप मा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।विषयसूची [लुकाउने] १ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ
असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन यि राशि हुने मानिसहरू, हेर्नुहोस तपाई कुन राशि?
मानिसका राशि अनुसार उनिहरूको बानी व्यवहार फरक फरक रहेको हुन्छ । मानिसहरूको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधै असर पर्छ । जसले गर्दा उनीहरूको जिन्दगी प्रभावित हुन् पुग्छ । यही नक्षत्रको आधारमा नै प्रत्येक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य र स्वभावको सङ्केत मिल्ने गर्दछ । आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन ।कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्या कुराको खुलासा पनि तपाईको कंडलीले गर्छ । तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ । जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्था
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डको प्रस्ताव
काठमाडौं : नेकपाको संस्थापन पक्ष विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको मत लिएर जाने तयारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अस्वीकार गरेका छन्। आइतवार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको एउटा बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादलले पार्टी विभाजनका लागि गरिने कुनै पनि प्रयासमा आफ्नो असहमति रहने धारणा राखेका हुन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले फोन गरेर बोलाएपछि बादल आइतवार दिउँसो प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। उनी प्रचण्ड निवास पुग्दा पहिले नै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बसिरहेका थिए। प्रचण्डले केही कामका लागि भनेर बोलाएपछि त्यहाँ पुगेका उनी अन्य नेताहरुलाई पनि देखेपछि अलमलमा परेका थिए। बादल खुमलटार पुगेपछि उनीसँग दुई नेताले संवाद गरेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बादलसँग अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले संवाद ग
साढे दुई वर्षसम्म यी पाँच राशिमा शनिको प्रभाव ! [बच्ने ज्योतिषीय उपायसहित]
ज्योतिष शास्त्रमा शनिको विशेष भूमिका हुने गर्दछ। शनिको राम्रो र नराम्रो प्रभावले व्यक्तिलाई निकै खुशीका साथै केहि समस्याहरु पनि निम्त्याउने गर्दछ। शनिलाई निष्पक्ष ग्रह पनि भनिन्छ। २४ जनवरी २०२० देखि शनि मकर राशिमा यात्रा गरिरहेको छ र अर्को साढे दुई वर्षसम्म यो राशिमानै रहनेछ। यदि, शनि कुनै एक राशिमा बसिरहन्छ भने यसले त्यस राशिलाई मात्रै नभई अन्य राशिहरुलाई पनि असर गर्छ। मकर राशिमा शनिको गोचरका कारण धनु, कुम्भ र मकर राशिमा पनि शनिको साढेसाती चढेको छ। जबकि मिथुन र तुला राशिमा शनिको ढैय्या चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, यी पाँच राशिका व्यक्तिहरुले कैयौँ समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरि, मे महिनाको ११ तारिखमा वक्री चाल चल्नेछ। जसका कारण, यी राशिका व्यक्तिहरुमा अझै अधिक समस्याहरु थप्पिन सक्छ। यदि शनि कुनै पनि व्यक्तिको कुंडलीको शुभ स्थितिमा छ भने, शनिको चालले उक्त व्यक्तिलाई धेरै फा
महिला र पुरुषबीच यौनसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । यौनसम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? सामान्यतयाः रातको समयमा यौनसम्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, यौनसम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनसम्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको शरीरमा भिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उत्तेजित हुन्छ र महिल
कुनबार कुनदेवी देवताको पुजा आराधना गरे कस्तो फल मिल्छ पुरा पढ्नुहोस
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्।हरौँ, हप्ताको कुन बार कुन-कुन देवी-देवताको पुजा गरिन्छः१. आइतबार:हिन्दु धर्ममा आइतबारलाई ‘सूर्य देव‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मिसाउनुहुँदैन। व्रत बस्नेहरूले रातो वस्त्र लगाउँदा सूर्यदेव प्रसन्न हुन्छन् भने पुजा गर्दा रातो रङ्गको फूल चढाउनुपर्दछ २. सोमबार:सोमबार ‘शिवजी‘को दिन हो। यस दिनमा शिवजीको पुजा-आरधना गरे शिवजी चाँडै नै खुसी हुन्छन्। यस दिनमा शिव मन्दिर गई विशेषतः ‘अर्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शिवाय’ मन्त्र जप्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शिवजीको पुजा गर्नेबेला शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भई मागेको वर दिने विश्वास गरिन्छ।